Antibodies-ka ay soo saarto alpaca wuxuu baabiin karaa coronavirus cusub oo leh saameyn wanaagsan - Medicinerawmaterials.com
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, saynisyahano u dhashay Beljim iyo Mareykan ayaa ogaaday in unugyada difaaca jirka ee ay soo saarto alpaca ay fure u noqon karaan helitaanka coronavirus cusub Waxay ka heleen alpaca qayb yar oo u muuqatay inay joojinayso fayraska, taas oo ka caawin doonta saynisyahanada inay sii horumariyaan daawooyinka lagu daaweeyo coronavirus-ka cusub.
Sida ku xusan warbixinta "New York Times" ee ku saabsan 6, dhowaan, saynisyahano reer Belguim ah waxay ogaadeen in unugyada alpaca ee difaaca jirka ay baabiin karaan coronavirus-ka cusub, cilmi baarayaashu waxay ku daabaceen natiijooyinka ku haboon joornaalka "Cell" (Cell) Maraykanka 5-tii maxalliga ahayd. .
Sida lagu sheegay warbixin cilmi baaris ah, alpaca caadi ah oo loogu magac daray Jiilaal-ka Beljimka ayaa ka qayb qaatay daraasado taxane ah oo ku saabsan SARS iyo Bariga Dhexe ee Neefsashada Coronavirus (MERS). Seynisyahannadu waxay ogaadeen in labo antibody wax ku ool ah oo ka dhan ah MERS iyo SARS, siday u kala horreeyaan, saynisyahannaduna waxay xaqiijiyeen in labadan difaaca jirka ay sidoo kale baabi'in karaan fayraska cusub ee 'coronavirus'.
Qoraaga daraasadan, Dr. Xavier Saelens, oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga viroolajiyada ee jaamacada Ghent ee Beljimka, wuxuu tilmaamay in maadama unugyada alpaca si fudud loo xakameeyo loona soo saaro, unugyadaan alpaca waxay noqon karaan antibodies kale (oo ay kujiraan antibodies neocrown-ka bini-aadamka). ama la shiilay, iyada oo unugyadaan isku dhafan ay xasilloonaan karaan inta lagu jiro howlaha kor ku xusan.
Raadin lama filaan ah oo laga helay shaybaarka Jaamacadda Brussels sanadkii 1989 ayaa cilmi-baarayaasha siisay aragti ku saabsan sifooyinka aan caadiga ahayn ee difaaca jirka ee dhiigga geela, llamas, iyo alpacas. Unugyadaan difaaca jirka ayaa markii hore loo adeegsaday cilmi baarista AIDS-ka, markii dambena waxay cadeeyeen inay wax ku ool u yihiin fayrasyo ​​fara badan, oo ay ka mid yihiin cudurka dhawaan ka dilaacay Bariga Dhexe ee Cudurka Neefsashada (Mers) iyo Xanuunka Neefsashada daran ee daran (Sars).
Cilmi baaris ayaa tilmaamaysa in bini aadamku ay soo saaraan kaliya hal nooc oo antibody corona ah, halka alpaca ay soo saarto laba nooc oo antibodies cusub oo corona ah, oo mid ka mid ahi la mid yahay unugyada jidhka ee jidhka ku jira cabir ahaan iyo isku dhis ahaanba, laakiin antibodyka kale ayaa aad uga yar. Antibody ka yar ayaa ka waxtar badan baabiinta coronavirus-ka cusub.
Maqaalka "New York Times" wuxuu tilmaamay in muddo dheer, saynisyahannadu ay baranayeen unugyada alpaca. Tobankii sano ee la soo dhaafay, saynisyahannadu waxay isticmaaleen unugyada difaaca jirka ee ay soo saarto alpaca ee daraasadda AIDS-ka iyo hargabka, waxayna ogaadeen in unugyada difaaca jirka ee alpaca ay saameyn wanaagsan oo daaweyn ah ku leeyihiin labadan fayras.
Baarayaasha ayaa rajeynaya in unugyada difaaca jirka ee ay soo saarto alpaca aakhirka loo isticmaali doono daaweynta kahortaga, taas oo ah, in lagu mudo antibodies cusub ee alpaca dadka aan ku dhicin cudurka cusub ee coronavirus si looga ilaaliyo cudurada cusub ee coronavirus. , Si looga ilaaliyo inay bukaanku ku dhacaan inta lagu jiro daweynta bukaanka qaba oof-wareenka cusub ee wadnaha.
Marka lagu daro cilmi baarista ku saabsan unugyada alpaca ee ka dhanka ah MERS iyo coronavirus-ka cusub, saynisyahannadu waxay kaloo sameeyeen cilmi baaris ku saabsan fayrasyada faafa sida AIDS iyo ifilada alpaca. Daraasaduhu waxay muujiyeen in alpaca ay sidoo kale soo saari karto unugyada difaaca jirka ee u dhigma fayrasyadan, waxayna leeyihiin saameyn daaweyn oo wanaagsan.
Daraasadu waxay ku nuuxnuuxsatay in kasta oo saameynta ka hortagga ee alpaca antibody taajkeeda cusub ay tahay mid deg deg ah, saamaynteeda maahan mid joogto ah. Haddii alpaca antibody taajkii aan mar kale la isku durin, saameynta ka hortagga waxay socon kartaa oo keliya hal illaa laba bilood.
Waxaa lagu soo waramayaa in ujeedada kooxda cilmi baarista ay tahay inay bilaabaan tijaabooyinka xoolaha iyo aadanaha ka hor dhamaadka sanadkan.